मोवाइलमा रमाइलो कुराकानी भएपछि जब युवतीले भेट्न बोलाइन्…. – Khabar 27 Media
मोवाइलमा रमाइलो कुराकानी भएपछि जब युवतीले भेट्न बोलाइन्….
February 11, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on मोवाइलमा रमाइलो कुराकानी भएपछि जब युवतीले भेट्न बोलाइन्….
एजेन्सी । १४ वर्षकी किशोरीलाई च्या’टबा’ट फ’सा’एर यौ ‘न स’म्ब’न्ध राख्ने प्रयास गर्ने एक व्यक्ति जेल पुगेका छन् । अमेरिकाको इ’डाहो राज्यको पो’काटे’लोका ती व्यक्ति यौ’ ‘न स’म्ब’न्ध’का लागि कि’शोरीलाई भेट्न पुगेका थिए
तर उनीसँग च्या’ट गर्ने किशोरी नभइ एक व’यस्क पुरुष थिए जसको हातमा क्यामेरा थियो । बाल यौ’ ‘नशोष’ण’वि’रुद्ध काम गर्ने इडा’हो’को एक संस्थाले फेसबुकमा यो भिडियो पोस्ट गरेको छ ।
२६ वर्षका डेस्मण्ड शे बो’र्जुमो’स्कीलाई मंगलबार साँझ पो’काटे’लो पुलिसले पक्राउ गरेको हो । भिडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफ्नो पहिचान नखुलाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
भिडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले इ’स्ट इ’डा’हो न्यूजसँग कुरा गर्दै घटनाबारे बताएका छन् । जो’सेफ (काल्पनिक नाम) ले क्रिस ह्यान्सेनको भिडियोबाट आफूले यतो आइडिया पाएको बताएका छन् ।
ह्या’न्सेन ए’नबीसी न्यूजका पत्रकार हुन् जसले ‘टु क्या’च अ प्रि’डेटर’ नामको लोकप्रिय कार्यक्रम चलाउँथे जसमा यौ’ ‘न ला’भ लि’नको लागि खोजीमा रहने व्यक्तिहरुलाई क्यामेराको सा’मना गराइन्थ्यो ।
जो’सेफले आ’इडियापाएपछि ह्वि’स्पर डा’उनलोड गरे र १३ देखि १४ वर्ष उमेरकी एक किशोरीको रुपमा पोस्ट गरे । ‘केही मिनेटमै १५ देखि २० जनाले म्यासेज गर्न थाले’ जो’सेफले इ’स्ट इ’डाहो न्यूजसँग भने ‘एक घण्टाभित्रै एक व्यक्तिले भेट्न चाहेको भन्न थाल्यो ।
’ भिडियोमा जोसेफले किशोरीको रुपमा कुरा गर्दै गर्दाको च्या’ट पनि सार्वजनिक गरिएको छ जहाँ केही समयमै ब्रो’जिमो’स्कीले ‘रमाइलो गर्ने चाहना छ ?’ भनेर सोधेका छन् ।
ब्रो’जिमो’स्कीले ‘प’ब्लिक फन’ अर्थात कसैले देख्न सक्ने ख’तराका बीच सार्वजनिक ठाउँमा यौ ‘न स’म्ब’न्ध राख्न चाहेको बताएका थिए । पहिले जो’से’फ’को कुनै यो’जना नभए पनि यति भइसकेपछि
भने उनले ब्रा’जिमो’स्कीला’ई पो’काटेलोको अपर सिटी क्रिक ट्रेलमा बोलाए । जोसेफ त्यहाँ पुग्दा ब्रो’जि’मो’स्की त्यहाँ बसिरहेका थिए । त्यहाँ ब्रो’जमो’स्की’को भिडियो रेकर्ड गरेपछि जोसेफ प्रमाणसहित पुलिसकहाँ गएका थिए ।
October 10, 2021 Shyam Lama
धोकेवाज हुन्छन् यी ६ प्र’कारका पु’रुष, कतिबेला लात हा’न्छन् पत्तै हुँदैन
September 4, 2021 September 4, 2021 Shyam Lama
कुन दिशामा सिरानी लगाएर सुत्दा के हुन्छ ? एकदम ख्याल राख्नुहोस
August 1, 2021 August 1, 2021 Shyam Lama